vavaka – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Hira fanombohana : raha misy fivoriana Vavaka Fanolorana ny andro : « Mba ho an’ireo rehetra miasa sy mivelona amin’ny ranomasina, anisan’izany ny tantsambo, ny mpanjono sy ny fianakaviany ». Vavaka torapo, araka izay anentanan’ny Fanahy Famakiana sy fandinihana ny Lohahevitry ny volana diavina (Aogositra) Vavaky ny Taon-jobily + Rainay, Arahaba ry Maria, Voninahitra, fiantsoana an’ireo Olomasina Mpiaro …
FET 100 taona, TPPM, vavaka
Vavaka ho an’ny Fihaonambe JNE 2
Ry Andriamanitra Rainay ô ! Misaotra Anao izahay noho ny fampiombonanao anay amin’ity fihaonambe faharoa ho an’ny Ankizy Katolika manerana ny Nosy ity. Faly izahay fa mifankahita sy mifankahalala, mifampizara sy afaka maneho ny maha izy anay ato amin’ny Fiangonanao sy ny Firenenay. Ampitomboy ao anatinay tsirairay avy ny fitiavam-bavaka sy ny fitiava-namana, amin’ny maha …
Ry Jesoa Kristy Tompo, ianao no nampianatra anay ho mpamindra fo tahaka ny Ray any an-danitra, ary nilaza taminay fa izay mahita Anao dia mahita ny Ray, asehoy anay ny endrikao dia ho voavonjy izahay. Ny topimasonao feno fitiavana nanafaka an’i Zake sy Matio tamin’ny fanandevozan’ny vola, sy ilay vehivavy ratsy fitondran-tena ary i Madelenina …
Taonan'ny famindram-po, vavaka
Vehivavy voalohany nasandratra ho mpampianatry ny Fiangonana Mb Terezy avy any Avila izay ankalazaina ankehitriny ny faha-500 taona nahaterahany. Nohalalininy manokana ny vavaka nampianarin’i Tompo ka indro ifampizarana amintsika anio. Rainay any an-danitra Afaka manatona an’Andriamanitra amim-pahatokiana isika, miaraka amin’ny fahatsorana sy ny fahasahiana feno fanentretenan’ny ankizy resy lahatra fa hotiavina. Inona moa ny Lanitra …
1 septambra, andro maneran-tany ivavahana ho an’ny Voaary
Atokana ivavahana ho an’ny Voaary ny 1 septambra manomboka amin’ity taona 2015 ity hoy ny Ray masina Fransoa. Marihina fa efa ela ireo havantsika ortôdôksa no nisafidy io daty io mba hitondrana am-bavaka manokana ny fitsimbinana ny Voaary. Ny andro maneran-tany ivavahana ho fitsimbinana ny Voaary dia fotoana iray : ahafahantsika manavao ny fanekena ilay …
Ry Andriamanitry ny Fitiavana mandrakizay ô, nomenao anay ho modelin’ny fahamasinana iainana ao an-tokantrano Zélie sy Louis Martin Olontsambatra. Nitana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana, Tao amin’ny adidy sy olana niseho teo amin’ny fiainany izy. Nanabe ny zanany mba ho tonga olomasina. Enga anie ny vavaka asandratr’izy ireo Sy ny oha-piainana nomeny, …
Mb Terezy kely, vavaka